Iphepha elingaphantsi, i-Sublimation Paper Roll, i-Sublimation Paper Custom-Chenhao
Ukwenziwa kwePhepha le-Sublimation Ingcaphephe
Yasekwa ngo-2018, i-JIANGYIN CHENHAO DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD ifumaneka kwisiXeko saseJiangyin, kwiPhondo laseJiangsu, kufuphi nePort yaseShanghai. Lishishini elinobuchwepheshe obuphezulu obusebenza kwihlabathi liphela, kwaye ukutyhubela iminyaka lihambisa abathengi ngexabiso eliphezulu rhoqo ngeemveliso zokusika kunye nolwazi lobuchwephesha.
I-Ink ye-Dayi engaphantsi kwe-100ml yeSuit ye-Desktop Printers
Ngamava okuvelisa iminyaka engaphezu kwe-10
Unikezelo ngomnyango ukuya emnyango
Sinikezela ngenkonzo epheleleyo yomnyango ngendlu nge-International Express (DHL/UPS/TNT/Fedex), uthutho lomoya okanye lolwandle.
Inkampani yethu igubungela ngaphezulu kwe-30,000 yeemitha zesikwere kwaye iye kwimveliso yobuchwephesha eqokelela uyilo lwephepha ledijithali, i-R&D, imveliso kunye nentengiso iyonke.
Zombini iiodolo ze-OEM kunye ne-ODM ziyafumaneka kumzi-mveliso wethu, siya kukunceda unciphise iindleko zokungenisa elizweni kwaye wanelise abathengi bakho!
Iphepha lokutshintshela (ukukhanya) i-A4 A4 ifomathi ye-T-shirt eyeyakho i-T-shirt yephepha elikhethekileyo lokudlulisa ubushushu: iphepha elikhanyayo lokudlulisa umbala lilungele ukuprinta iipateni kwimpahla enombala okhanyayo. I c...
I-Warpage kunye nokulawula umgangatho wephepha lokudlulisa ubushushu
Iphepha lokutshintshela luhlobo lwephepha eligqunyiweyo. Ukuba izinga lokwandiswa komgangatho ogqunyiweyo kunye nephepha elixhasayo alihambelani phantsi kobushushu kunye nobushushu obuphezulu, kuya kubangela enye-...